အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): ရန်ကုန်သို့ အလည်တစ်ခေါက်(အပိုင်း၁)
ကျွန်တော်ကရန်ကုန်သား အမေနဲ့ အမနဲ့ နေတာ စီးပွားရေးသိပ်အဆင်မပြေလို့ စင်္ကာပူကိုအလုပ်သွားလုပ်တာ ဗဟုသုတတွေ အတတ်ကောင်းတွေတတ်လာတာပေါ့
အဲဒါနဲ့ ကျနော်က သူတို့ မင်္ဂလာဦးညကိုပြေးမြင်မိတယ်
အစ်မအိုးကြီးကနဲတာကြီးဟုတ်ဖူး ၃၉ ဆိုက်လောက်ရှိတာ သူ့ ကိုလုပ်တဲ့ ယောက်ဖကတော့ရှယ်ပဲပေါ့
မမနို့ ကြီးတွေကလည်းအယ်ထွက်နေတာလေ အဲလိုတွေးရင်းနဲ့လီးကတောင်လာရော စိတ်ထဲကလည်းကို့ အစ်မအရင်းကိုပစ်မှားနေပီ မကြာပါဖူးအစ်မကိုမှန်းပီးဂွင်းထုလိုက်တာ သုတ်ရေတွေက ပန်းထွက်ကုန်တာပဲ အဲဒီနောက်ပိုင်းဂွင်းထုရင် အစ်မကိုပဲ မှန်းထုခဲ့ တာ ဖီးပဲဗျာ ဒေါက်တာချက်ကြီးထဲမှာလည်း ကို့ အစ်မ ကိုလိုးတဲ့ အောစာတွေဖတ်ရတော့ပိုဆိုးကုန်တာပေါ့ အဲလိုနဲ့ခြောက်လလောက်ကြာတော့ ရန်ကုန်ကိုတစ်လအလည်ပြန်တာပေါ့
အစ်မေရယ်အမရယ်ယောက်ဖရယ်လာကြိုကြတယ်လေ ယောက်ဖtaxi နဲ့သူကသူ့ ကိုပိုင်ကားလေးကိုတက်စ်ီဆွဲစားနေတာ အစ်မကတင်ထားတာထက်ပိုလှနေပါလား ယောက်ဖကပိန်ပိန်သေးသေး လေး ဒီကောင်အစ်မကိုတော့ ဘယ်လ်ိုမှကုန်အောင်မဖြိုနိုင်ဖူးဆိုတာသိလိုက်တယ် ကားပေါ်တက်တော့ ကျနော်ကကားရှေ့ ခန်းကစီးရတာ ထိုင်ချင်တာကတော့ အစ်မနဲ့ တူတူထိုင်ချင်တာ သူ့ ပေါင်ကြီးကိုထိချင်နေတာ အခွင့်ကမသာဖူး အမေနဲ့ အစ်မက နောက်ခန်းမှာထိုင်ကြတာ့ အိမ်ရောက်လာတာပေါ့ အစ်မတို့ လင်မယားကလည်း အိမ်မှာအိပ်တာတဲ့စိတ်ထဲကျိတ်ပျော်နေတယ်.
ချောင်းလို့ ရပီပေါ့ အဲဒါနဲ့ သူတို့ ဘယ်အခန်းအိပ်ကြလည်းရှိုးလိုက်တယ် အိမ်ရဲ့ နောက်ဆုံးအခန်း အဲဒါမှသေပီဆရာပဲ ကိုအိပ်ရမှာက အရင်အိပ်နေကြ အိမ်ရှေ့ အခန်းတဲ့အမေက အလယ်ခန်းမှာအိပ်တယ် ခက်တော့တာပဲ လမ်းစကိုပျောက်နေပီ
ပထမညတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ ပီး ညနက်မှပြန်လာတယ် ဒုတိယညလည်းဒီအတိုင်းပါပဲ အစ်မကိုမှန်းပီးဂွင်းထုအိပ်လိုက်ရတယ် အစ်မရေချိုးတာကတော့ အိမ်ရှေ့မှာပါပဲ ပုံမှန်ထမိန်ရင်ရှားနဲ့ ချိုးတာပါ ကျနော်ကတော့မသိမသာ အိမ်ထဲကနေကြည့်ရင်းလီးကတောင်လာပြန်ရော အိမ်သာကလည်းအလုံပိတ် ချောင်းလို့ မရ အဲလိုနဲ့ 
တတိယမြောက်ညကြတော့မနေနိုင်တော့ဖူး အရမ်းကိုချောင်းချင်နေတာ အရင်ဆုံးအိမ်ရဲ့ ဖွဲ့ စီးပုံကိုပြောရအုံးမယ်
အိမ်ကပျဉ်ထောင်သွတ်မိုး ၂၀x၆၀ ရှေ့ဆုံးမှာကဧည့်ခန်း နောက်အိတ်ခန်းသုံးခန်း အိတ်ခန်းတခုနဲ့ တခုက အထပ်သားပဲ ကာထားတာ နောက်ဆုံးက မီဖိုခန်း အိတ်ခန်းတွေအပေါ်မှာအပေါ်ထပ်တခုရှိတယ် ပစ္စည်းအတိုအစတွေထားတာ လူတော့ မနေဖူးသွတ်နဲ့ နီးတော့ပူလို့အကြံရပီ ဘယ်လိုကြံမလည်းကြည့် ပေါ်ထပ်ကို တက်ညကြရင်ချောင်းလို့ ရအောင် လမ်းရှင်း ကံကောင်းချင်တော့ ကြမ်းပေါက်တွေကဟနေတယ် ကောင်းကောင်းချောင်းလို့ ရတာပေါ့ ညရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားမယ် ညနက်မှပြန်လာမယ်လို့ အိမ်ကိုပြောခဲ့ တယ် လမ်းထိပ်ကတီးဆိုင်မှာ ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ပွားပီး ဆယ်နာရီခွဲတော့ ပြန်လာတယ် အိမ်ကမီးတွေတောင်ပိတ်နေပီ ခြံတံခါးသော့ ကိုအသံမမြည်အောင်ဖွင့်ပီး အိမ်ထဲကိုဝင် အပေါ်ထပ်က်ိုအရှေ့ ကနေကုတ်တက် နေခင်းကရှင်းထားတဲ့ နေရကို အသံမကြားအောင်မနဲကို အသက်အောင့်သွားရတယ် ရောက်ပီ ကြည့်လိုက်တယ် ခပ်ရေးရေးပဲမြင်ရတာနှစ်ယောက်သားပက်လက်ကလေးတွေ
မီးလုံး အမှိန်းလေးထွန်းထားတာ စကားတွေပြောနေကြတုန်း ဆယ်မိနစ်လောက်ဆက်စောင့်လိုက်တော့ယောကဖကအစ်မဖက်စောင်းပီးဖက်လိုက်တယ် စပီရင်တွေကတဒိတ်ဒိတ်နဲ့အစ်မကတောငြိမ်နေတယ် နို့ တွေပွတ်နေပီ ဘာမှလည်းမချွတ်သေးဖူး ပေါင်နှစ်လုံးကြားကိုလည်းပွတ်နေပီ
စာရေးရတာညောင်းနေပ်ီ အပိုင်း၂ ကြမှအစ်မတို့ လိုးကြပုံက်ိုဆက်ပြောပြမယ်နော်
Posted by bluegyi at 04:09
Ar Kar 17 May 2013 at 02:32
အပိုင်း2ရေးပါတော့ဗျို့မြန်မြန်လေးရေးပါဟ
Win Mg 19 May 2013 at 00:29
chit aung 30 July 2013 at 10:47
ရေးတော့လေ စေင့်နေတာ ကြာလှပေါ့
Heart Court 23 August 2013 at 20:05
Unknown 25 September 2013 at 04:59
အလွန်ပင်စိတ်ဝင်စားစွားနဲ့ စောင့်မျှော်နေပါတယ် မြန်မြန်ဆက်ရေးစေချင် လှပါပြီ
khinelin 28 October 2013 at 06:02
arakan: arakan: အရမ်းလိုးချင်တယ်........ကောင်မလေးတွေကို ခံချင်တဲ့ ဖာသည်မတွေဇယားလေးတွေ လင်လို .နေတဲ. ကောင်မလေးတွေ အလိုးခံချင်ရင်အပ်လိုက်ပါစိတ်တိုင်းကျလိုးပေးမယ်....................arakanhertage11@gmail.com
Aung Win 13 January 2014 at 21:05
အပိုင်း၂ ကိုမြန်​မြန်​ ​ရေးဗျာာ
nynlin. lintun7April 2015 at 09:41
zinyawking 8 April 2015 at 11:38